AmaBhokobhoko aphelelwa yisikhathi elinde impendulo
UNATHI Mthethwa ongungqongqoshe wezeMidlalo ehleli nokaputeni wamaBhokobhoko uSiya Kolisi kulindeleke ukuthi anikeze i-SA Rugby impendulo kuleli sonto ezocacisa ukuthi iyabuya imidlalo noma cha ngemuva kokumiswa yiCovid-19 Isithombe: BACKPAGEPIX
Mike Greenaway | August 18, 2020
ININGI likwamukele ngezandla ezimhlophe ukwehlela kwezwe esigabeni sesibili sikathaqa kodwa okungaba yizindaba ezimnandi kakhulu kubadlali be-rugby wukuthola igunya lokuziqeqesha ngokugcwele.
Siya ngokubaphelela abadlali baseNingizimu Afrika isikhathi sokubuyela enkundleni. NgoLwesine kuzobe kuphela amasonto amabili kusuka iSouth Africa Rugby yafaka isicelo sokuvunyelwa ukuthi kubuyelwe ekuziqeqesheni nasekudlaleni.
Lokhu kulandele ukuthi ngo-Agasti 6 ungqongqoshe wezeMidlalo, uNathi Mthethwa egxivize ukuthi sekungabuyelwa ekudlaleni inqobo uma kuzolandelwa imigomo yezokuphepha ukuthi kungabikhona ukuthelelana ngeCovid-19.
I-SA Rugby iphendule ngezinhlelo enazo kodwa kuze kube yimanje bebengakayitholi imvume.
Kumele impendulo ifike kuleli sonto ukuze abadlali bezokwazi ukuziqeqesha ukuze babe sesimeni sokuqhudelana nabanye. Okwamanje abadlali bangakwazi ukuziqeqesha ngamaqoqo abadlali abahlanu kuphela.
Ngakolunye uhlangothi ibhola nalo elifakwe ohlwini olulodwa ne-rugby njengomdlalo onokuthintana, selibuyelile enkundleni.
Ngesikhathi kunganyakazi lutho kwi-rugby kuleli, kwiNorthern Hemisphere ibuyile imidlalo ye-rugby ngempelasonto edlule kanti eNew Zealand okuyiyona eyithinta ngqo iNingizimu Afrika, isiyiqedile imiqhudelwano edlalwe ngemuva kokuqedwa komvalelandlini khona kanti e-Australia imiqhudelwano iyaqhubeka.
Akungabazeki ukuthi abadlali baseNingizimu Afrika bazozibona besalela ngemuva. Lokhu kuzosho ukuthi amaBhokobhoko azobe ecikizela uma eseyibamba kwiRugby Championship ehlelelwe ukuthi ibe seNew Zealand ngoNovemba.
Umqeqeshi wamaBhokobhoko uJacques Nienaber useke wakusho ukuthi ngeke abaqoke abadlali abangenayo okungenani imidlalo eyisithupha kwiCurrie Cup uma esekhetha isikwati seRugby Championship. Ukuze lokho kwenzeke kumele okungeni iCurrie Cup iqale maphakathi noSepthemba.